Amathrendi we-Marketing Automation, Izinselelo, nempumelelo | Martech Zone
UHolger Schulze kanye nebhulogi le-Everything Technology Marketing wenze ucwaningo kubathengisi be-B2B endaweni ye- Umphakathi Wezokumaketha we-B2B ku-LinkedIn.
Ngibuzile UTroy Burk, Isikhulu Esiphezulu se-Right On Interactive - a platform yokumaketha yokuzenzekelayo lokho kukhonjwe njengomholi kule mboni - ukunikeza impendulo ngemiphumela yocwaningo.
Ucwaningo lwenziwe kahle futhi luhlinzeka ngamamethrikhi amahle wokuthi i-subset yabathengisi be-B2B ikusebenzisa kanjani ukuzenzakalela kokumaketha. Kudos kuHolger nethimba elihlanganise lokhu. Ezimpendulo ezingama-909, iningi labaphendulayo beliqhamuka ezimbonini zesoftware, ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu nezokumaketha ezinabasebenzi abangaphansi kwekhulu. Ezinkampanini eziwela kulesi sigaba sibonile izitayela, izithiyo nezinhloso ezifanayo. Lezi zinkampani zisebenza kanzima ukuthola amakhasimende amasha, ngokushesha okukhulu, ngesabelomali esilinganiselwe okufanele zisebenze kuso. Iningi ligxile ekukhiqizeni okuholayo, izindleko ziyinto ebalulekile, futhi ukulinganiswa kwe-ROI ngeshwa kusekelwe ekuphenduleni komkhankaso (kuvulwa futhi kuchofozwe).
I-Marketing Automation eyenziwe kahle ilingana nembuyiselo enkulu yezezimali, ubudlelwano obuhlangene kakhulu, ukusebenza kahle kwangaphakathi okuthuthukisiwe, nokwakha ulwazi lwamakhasimende olufanelekile noluzuzisayo.
Ngokwengeziwe, uTroy uphawule ukuthi ngenkathi abamukeli bekhuluma ngesabelomali kulo lonke ucwaningo kepha ngaphezulu kwengxenye, 57%, balinganise ukusebenza ngokuvula nangokuchofoza ngamanani. Ngaso leso sikhathi, u-37% uthe isabelomali yisona sithiyo esikhulu kunazo zonke futhi sithemba kakhulu izisombululo ezingabizi kakhulu. Ucela umbuzo wokuthi ngabe abathengisi balinganisa kahle ipulatifomu yabo yokuthengisa ezenzakalelayo noma cha. Akufanele ulinganise noma iyiphi ipulatifomu yokumaketha ngokususelwa kuzindleko… kufanele ngabe ulinganisa ifayela lakho le- ukutshalwa kwezimali okuzenzakalelayo ngokususelwa ekubuyisweni!
Kungumugqa ongezansi wokungaqondakali: Abamukeli bafuna ukuhola okuningi, isixazululo esingabizi sokumaketha, ngesabelomali esicaba noma esinciphayo sokumaketha okuzenzakalelayo. Futhi balinganisa impumelelo ngamanani avulekile futhi achofoze.
Tags: b2bukumaketha kwe-b2bukuzenzekelayo kokuzenzekelayoizindleko zokumakethaukutshalwa kwezimali okuzenzakalelayointengo yokuthengisa ezenzekelayobuyela kutshalomalibuyela ekutshalweni kwezimalingqo ekuhlanganyelenitroy burk
Izindlela Ezi-7 Zokuthumela I-imeyili Yeselula Engaphumelelanga
Ubufakazi Bukhomba Ukuhlangana Phakathi Kwezinga le-SERP ne-Web Host